China I Ceramic Printing Equipment Uk China Manufacturers & Suppliers & Factory
I Ceramic Printing Equipment Uk - umkhiqizi, ufektri, umhlinzeki waseChina
(Yonke imikhiqizo engu- 24 ye-I Ceramic Printing Equipment Uk)
Ukuqondisa ku-Garment Printers Ukudayiswa Ekhaya
Kuthatha cishe ngonyaka owodwa ukuthuthukisa lo mshini, sihlose ukwenza kube lula ukusebenza futhi kukhwalithi ephezulu kodwa ngenani elifanele. Ukushicilelwa kwe-T-shirt ekhaya , okusho ukuthi ungathenga umshini owodwa ukuphrinta ekhaya. I-T-shirt Yokunyathelisa Izinsiza Nezimpahla , sinefektri, sinomshwalense...
I-UV Flatbed Printing Technology
Ukwethulwa kwemikhiqizo ye- UV Flatbed Machine : Imishini yethu iyakwazi ukuphrinta noma yimuphi umfanekiso umthengi afuna kuwo noma iyiphi impahla enomkhiqizo ophelile wekhwalithi ozokwenza umqondo ohlala njalo. Yiba phansi kuya emadwaleni e-plafond, umcabango, umnyango wekhabethe noma ubukhulu begumbi lakho...
Ukuqondisa ku-Power Bank iphrinta ye-Youtube
Namuhla, abantu abaningi bayaphishekela ubuntu, bafuna ukuhlobisa izindawo ezizungezile ngokuvumelana nezithakazelo zabo. Iphrinta ye-UV esebenzayo isungulwe futhi igcwalise lezi zimfuno, umshini wethu ungenza ukuthi umuntu noma iyiphi imidwebo yezinto ezibonakalayo igcwaliseke ngaphandle kohlobo lwe-stylist oluhle,...
Ukuqondisa kumshini wokuphrinta weBhange leMandla
Singumholi embonini yemishini yokunyathelisa ye-UV.Umshini wokunyathelisa we-3D Stereoscopic unesistimu elawulwa yikhompyutheni eminingi engaxhunyaniswa ngqo kukhompyutha. Uma nje izithombe zemibukiso (izithombe) zingena kukhompuyutha, izithombe zingahle zidwetshwe ngqo kunoma yiziphi izithelo. Iqukethe izici...
Ukuqondisa ku-Power Bank iphrinta ku-inthanethi
Imishini yokunyathelisa ibhange yamandla njenge-office ejwayelekile yephrinta, kulula ukusebenza, ukuma ngokushesha, ngokushesha futhi kulula. Okukhiphayo okusheshayo, okuphumelelayo, okuguquguqukayo kanye nokwenza umuntu. Akugcini nje ukukhombisa ukuthungwa kombala, umbala we-gradient, umbala wombala ophakathi, kodwa...
Ukuqondisa ku-Printer Bank Bank
Nge-RF-A3UV Power Bank Printer ungabala futhi uhambise izindawo zakho zasekhaya. Ungaphrinta kunoma iyiphi impahla, uzalise ngokuqondile kunoma yikuphi okubonakalayo noma yimiphi imidwebo yezithombe ozikhonzile, uguqule futhi unikeze izikhala zakho eziyingqayizivele. Njenge-fresco yedijithali, kodwa ungakhetha...
Ukuqondisa ku-Power Bank iphrinta Ink
I-Shenzhen RFC Qhubeka nokuthuthukisa, ukuthuthukisa nokukhiqiza i- Direct To Power Bank Printer iminyaka engu-10, i-RFC A3 iphrinta ye- UV ingaphrinta noma yikuphi amagama nezithombe odongeni, izinkuni, i-tovas, iphepha, njll ekhaya, ehhovisi, esikoleni, esitolo, esitolo, e-Restaurant njll. . ukukhangisa noma...
I Ceramic Printing Equipment Uk I-Ceramic Printing Equipment Uk I-Ceramic Tile Printing Equipment I-Ceramic Printer Uk I-Digital Shoes Printing Equipment I-Ceramic Equipment Printing I-Ceramic Printer Paper I-Ceramic Printer Ebay